Hlola iMarrakech, Morocco - World Tourism Portal
Hlola i-Marrakech, i-Morocco
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eMarrakech, Morocco.
Uhambo losuku olusuka eMarrakech
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni weMarrakech
Bukela ividiyo ngoMarrakech
Hlola iMarrakech eyaziwa nangokuthi iMarrakesh, elinye lamadolobha wasebukhosini we Morocco. Igama elithi Marrakech lisuselwa egameni lama-Amazigh (Berber) elithi amur (n) kush, elisho ukuthi "Izwe LikaNkulunkulu." Idolobha lesithathu ngobukhulu eMorocco, ngemuva Casablanca kanye noFez, futhi liseduze naphansi kwezintaba zezintaba ze-Atlas ezinamaqhwa. Kungamahora ambalwa ukusuka onyaweni ogwadule lwaseSahara. Ukuma kwayo nendawo ehlukanisayo kuyenze yaba indawo efinyelelekayo kuyo Morocco.
Idolobha lihlukaniswe izingxenye ezimbili ezihlukene: iMedina, idolobha elingokomlando, nesifunda esisha sanamuhla saseYurophu esibizwa ngokuthi iGuiziz noma iVille Nouvelle. IMedina igcwele izindlela ezinqamlezayo ezihlanganayo nezitolo zasendaweni ezigcwele umlingiswa. Ngokuphambene nalokho, uGuiziz udlala indawo yokudlela eyimanje, amaketanga okudla okusheshayo nezitolo ezinkulu zomkhiqizo.
Ihlobo lide futhi lishisa ngokunethwa yimvula ngokuphelele futhi izinga lokushisa langoJulayi livame ukungaphezulu kwe-35 ° C phakathi nosuku kodwa kupholile kuze kube yi-20 ° C phakathi nobusuku. Yikho-ke lomuzi uphila impela ngemuva kokushona kwelanga. Amagagasi okushisa ashaya iMarrakech minyaka yonke kanti amanye angashisa kakhulu kangangokuba i-zebury lingakhuphuka ngenhla kwe-45 ° C.
IMarrakech inesikhumulo sezindiza emhlabeni jikelele enezindiza eziqondile ezihleliwe ezivela London, Dublin, Oslo, Copenhagen, Stockholm, Paris, Madrid, nezindiza eziningi ezishaqisayo ezifika zivela kulo lonke elaseYurophu. Uma undiza usuka e-US, Canada, E-Asia noma kwenye indawo, kuzofanela ushintshe izindiza ungene Casablanca.
Izinkampani eziningi ezibiza kakhulu ziphansi zindiza eMarrakech. Ezinye izinkampani zindizela eCasablanca, lapho kungashintshwa khona indiza ye-45 min indiza eya eMarrakech.
Okufanele ukwenze eMarrakech, eMorocco.
Ukuhamba ngezinyawo eSahara kuyinto enhle. Ukuhamba, ikamela, ukuhamba kwamahhashi nama-ATV maningi futhi kungokwemvelo kule ndawo.
Uma usu-medina, konke kungabonakala ngezinyawo, yize uzobe usuhamba kakhulu ukuhamba. I-GPS ibalulekile uma ungafuni ukuthembela njalo kusizo lwendawo ukuthola indlela yakho. Ukuhlola okuningi kwedolobha, amabhasi namatekisi okufuya maningi.
Kukhona umhlahlandlela wokuhamba wamahhala nokusebenza kwemephu kweMarrakech, ebizwa ngokuthi iMarrakech Riad Travel Guide (ungayibheka esitolo se-App), engakusiza ukuthi ungalahleki ngokuphelele e-medina. Isebenzisa isibonakaliso se-GPS ngakho-ke kukhona futhi akukho mali yokuyisebenzisa futhi kufaka nezindawo ezibalulekile kanye nezindawo zokudlela ezithile ongazihambela.
Enye indlela futhi yothando ongahamba ngayo yi-caleche - evezwa kutchee - inqola encane edonswa ngamahhashi. Zingaqashwa e-Square de Foucauld (ipaki elincane ezansi kwe-Djemaa El-Fna). Kuwukuhlakanipha ukuvumelana ngentengo ngaphambi kokuqala ukuhamba. Njengentengo yomhlahlandlela, kufanele ukhokhe u-DH 150 ngehora, ngenqola ngayinye.
Kuningi ongakubona futhi ukwenze eMarrakech. Usuku lonke lunganikezelwa ekuzuleni ezungeze amasoyi nokufuna izinto ezingcono kakhulu ezisendlini. Idolobha linikezela ngezindawo ezimbalwa zomlando nezokwakhiwa kanye neminye iminyuziyamu ethokozisayo.
Vakashela iPalmeraie Palmeraie yiphaphu eluhlaza iMarrakech. Kuyisithambiso sangempela emaphethelweni edolobha. ILa Palmeraie ihlanganisa i-13,000ha futhi inezihlahla zesundu ezi-150,000 namahhotela athile. Yindawo ekahle yokuthatha isikhala esijana samahora ambalwa ngesikhathi sokugibela ikamela. Ngesikhathi sohambo lwakho lwe-20km uyakwazi ukuncoma izihlahla zesundu, iziqhingi ezinhle futhi ngenhlanhla encane inkanyezi yamazwe aphesheya eMarrakech! Ama-Lesamateurs ezithokozisayo, amaQuad akhetha amakamela.
Isikwele se-Djemaa El-Fna yisici esivelele sanoma yibuphi ubusuku baseMarrakech. Abaculi, abadansi, kanye nabathengisi bezindaba bapakisha lesi sikwele enhliziyweni ye-medina, basigcwalisa nge-cacophony yezigubhu zokushaywa kanye nokumemeza okujabulisayo. Izitolo eziningi zithengisa inani elithile lemali yokuthenga yaseMorocco (ezinye zinezindleko eziningi; bona isigaba se-Eat) futhi cishe uzokhethwa ngabesifazane abafuna ukukunikeza i-henna tattoo. Zithokozise imibukiso, kepha zilungiselele ukunikeza ezinye izingoma zokubuka. Emini igcwele kakhulu abathanda izinyoka nabantu abanezinkawu, kanye nezinye izitolo ezivamile. Ziba noma ngubani okukunikeza okuthile ongakufuni noma ongakushiya: Bazokubuza maduze ngemali (eningi). Uma ungafuni ukukhokha kakhulu le henna noma isithombe sakho ngenkawu ehlombe lakho, yehla ngenhlonipho lapho umnikazi wayo esondela.
Ama-Souks (ama-suuqs), noma izimakethe zase Marrakech, eduze kwe ndawo ye-Djemaa El-Fna, lapho ungathenga khona noma yini. Ukusuka izinongo kuya ezicathulweni, ama-jellabas kuya kuma-kaftans, amabhodwe wetiye kuya kumathegi nokuningi, okuningi. Ngokungangabazeki, ukuba ngowakwelinye izwe kusho ukuthi uzogcina ukhokha amanani aphezulu kunalokho okwenziwe ngumdabu, kepha kuze kube manje. Uma kwenzeka uphelelwa ama-dirhams, uzothola inqwaba yabantu abasemafayilini abazoshintshanisa ngentshiseko amadola akho noma ama-euro (yize isilinganiso esihle lapha sincane kakhulu kunasesikhundleni sokushintshana okusemthethweni). Konke okushiwoyo, abathengisi abanobudlova kakhulu kunokuthi, Egypt noma iTurkey, ngakho-ke zijabulise!
Tanneries Ukuvakashela amaTanneries kungaba yinto ethokozisayo. Noma abanye abantu bekutshela ukuthi le ndawo ingeyabantu bendawo kuphela, kungenzeka ukuthi uvakashele amaTanneries ngaphandle kokukhokha omncane. Ngemuva kokuthola iTannery, buza omunye wabasebenzi ukuthi ungayivakashela uthathe izithombe. Ama-tanneries asemaphethelweni empumalanga ye-Avenue Bab El Dabbagh. Lowo “mnqangi” omkhulu, iDar Dbagh, lapho kubonakala sengathi bathinta bonke abavakashi eduze kwesango laseBab Debbagh. Uzosondela ngokushesha kumhlahlandlela ozokunikeza i-sprig ye-mint futhi ikutshele ukuthi ukuvakasha akukho mali.
IKoutoubia Mosque, ngaphandle kwaseJaemaa El-Fna, ibizwa ngegama lemakethe yabathengisi ebikade ilapha. Kuthiwa i-minaret yes mosque yaseKoutoubia isiza eMarrakech njengoba i-Eiffel Tower ingena eParis. I-minaret ibonakala kusuka eGuiziz exhunywe kwi-Madina ngu-Avenue Mohammed V. Ebusuku, mosque ikhanyiswe kahle. Njengama-mosque amaningi ku Morocco, abangawona amaSulumane abavunyelwe ngaphakathi.
Amabhomu weSaadian awatholakalanga kuze kube sekupheleni kwekhulu le-20th. Zigcinwe njengoba zazinjalo ngezinsuku zenkazimulo zababusi baseSadan. Ngokungafani ne-El Badi Palace, ayizange ibhujiswe, mhlawumbe ngenxa yezizathu ezingakholelwayo. Umnyango uvinjiwe ngakho bahlala bengafundwanga amakhulu eminyaka. Ngaphakathi uzothola ukugcwala ngokweqile kwama-Zelij (tile we-Morrocan) kanye nomhlobiso omuhle. Uma ungaphakathi, ungalindela ukulinda emugqeni cishe imizuzu ye-45 ukubona ithuna elihlaba umxhwele kakhulu. Ngesikhathi ulapha, funa amathuna amaJuda namaKristu; babonwa ngokumaka kwabo okuhlukile nokuya ethuneni.
Izingadi zaseMajorelle, eGueliz inemali yokungena futhi ibiza kakhulu kunezinye izinto ezikhangayo. Kukhishwe ngandlela thile ngokuheha okuyisisekelo ongakubona engxenyeni yehora. Kodwa-ke, ihlinzeka ngokuthula okuhle okuvela ekuphithizelweni kanye nokuxinana kwemigwaqo yedolobha. Ipaki ineqoqo lezitshalo ezivela kuwo wonke umhlaba, kufaka phakathi okubonakala njengazo zonke izinhlobo zezikhutha emhlabeni. Fika lapha ekuseni ukugwema izixuku. Ngaphakathi kwezingadi kubuye kube nomnyuzi omncane kakhulu weBerber Museum, lapho kukhokhiswa imali yokufaka eyengeziwe. Imnyuziyamu engadini esetshenziselwa ukusingathwa kweqoqo elikhudlwana, kepha izinto zobuciko ezihehayo manje zilinde ukuboniswa emnyuziyamu omusha oseduze lapho uqeda ukwakha eminyakeni embalwa ezayo. I-Majorelle Café ngaphakathi kwezingadi yindawo enhle futhi ethule yokuphumula nokuthola isiphuzo nokudla, yize kunjalo ngamanani aphezulu kakhulu. Njengoba uyizithameli ezithunjiwe, ungalindeli ukuthi uzonikezwa izitsha zokudla ezihlasimulisayo. Kunesitolo sezipho esigcwele izithombe ezithokomayo zesikhathi (80-100 iminyaka ubudala), yize izinto zishibhile. Ngaphandle kwaseMajorelle Gardens, lindele ukuhlukunyezwa kakhulu ngabashayeli bamatekisi nabathengisa ama-trinket. Yazi ukuthi umugqa ungaba mude futhi uhambe kancane, ngakho-ke ungalindela ukulinda emugqeni imizuzu engu-30 noma ngaphezulu ngaphambi kokungena.
IDar Si Saïd Museum, eRue Riad Zitoun Jdid inemali yokungena, iyimyuziyamu i-5 mins kude ne-Djemaa El-Fna. Ihleli esigodlweni sakudala, ifaka izinto eziningi ezahlukahlukene ezivela eMorocco ngeminyaka, njengokuqoshwe kwezinkuni, izinsimbi zomculo nezikhali. Kunikezelwa embonini yezikebhe yaseMorocan yokhuni, ukuqoqa iqoqo elihle kakhulu lobuciko obudumile: amakhaphethi, okokugqoka, obumba kanye nobumba. Zonke lezi zinto ziyisifunda, zivela eMarrakech nakuyo yonke iningizimu, ikakhulukazi ivela eTensift, High Atlas, Soussthe, Anti Atlas, Bani naseTafilal. Umhlobiso wangaphakathi ufana kakhulu ne-El Bahia Palace (yize ihlaba umxhwele kancane), ngakho-ke uma uvakashela enye, ungacabanga ukweqa enye.
UBen Youssef Madrassa ungomunye wamadrassas amakhulu eNyakatho Afrika. Kuyisikole esinamathiselwe kwiBen Youssef Mosque futhi siyikhaya lobuciko obuhle nobuciko.
I-El Bahia Palace iyisigodlo esihle futhi esihle, sithandwa ngokuvakasha okuqondisiwe namakati adukayo. Isigodlo sikufanele ukuvakashelwa futhi sinikeza umbono omkhulu wokuthi kumele ukuba kwakunjani ukuba yisikhulu se19th sekhulu lesibili eMorocco. Kukhona ingadi enhle enezimbali zebhanana, amagceke okuthula, nezinye izitshalo ezithandekayo. Umhlobiso wangaphakathi ufana kakhulu ne-Dar Si Saïd Museum, enabantu abaningi kakhulu, ngakho-ke ungafuna ukukhetha eyodwa noma enye
I-El Badi Palace manje isiyincithakalo futhi kuhlalwa kuyo izingwamza namakati adukayo. Kukhona ezinye izindlela ezingaphansi komhlaba ongazihlola. Ukubuka okuvela esigcawini kuhle kakhulu.
Izingadi zaseMenaara, ezisentshonalanga yedolobha, futhi ziqukethe ingxubevange yezithelo nezihlahla zomnqumo ezizungeze indawo ephakathi nendawo okuyindawo ebonakalayo kumakhadi ezivakashi. I-pavilion yakhiwa ngesikhathi sozalo lwe-16th century Saadi futhi savuselelwa e1869. Ine-cafe encane.
ICyber ​​Park, enyakatho-ntshonalanga ye-mosque yaseKoutoubia, ilandela i-Avenue Mohammed V. Ingadi yomhlobiso evulekele umphakathi. Imvamisa kakhulu ngabantu bendawo. Muhle kakhulu futhi ugcinwe kahle. Emnyango uzothola umbukiso omncane ngocingo nokuxhumana eMorocco, usingathwe yiMoroc-Telecom, nayo evulekele umphakathi. Yindawo enhle kakhulu ukubanda.
Isikwele esikhulu eMedina yi-Djemaa El-Fna. Sizungezwe ama-labyrinths angenasiphelo ama-souks (ama-bazaars) nemigwaqo yama-alleyways ehlanganisa yonke iMedina. I-Djemma El-Fna iyimfanelo njengoba kuhlale kukhona okufanele ukukubona lapho imini nobusuku ukuthi kungabathandi bezinyoka, ama-verbats, abashoyo, noma abaculi nezindawo zokudla (ezinye zidonsa kakhulu). Ebusuku isikwele siyavela impela lapho abantu bezulazula beya kumakha amnandi nasemibonweni ejabulisayo. Njengoba kusihlwa kumnyama, ukuqhuma nokuxokozela kuqhubeke. Umculo ojwayelekile ubonakala kakhulu futhi une-hypnotic xaxa.
Ngqo eningizimu ye-Djemaa El-Fna yiRue Bab Agnaou. Ukuhamba ngemizuzu emihlanu kukuyisa ngqo emnyango owaziwa ngeBab Agnaou esifundeni saseKasbah eMedina. Ukungena kweBab Agnaou, ngokusebenzisa amabhampasi, yikhona okuhlaba umxhwele kakhulu konke ukungena kwemigwaqo yaseMedina. IKasbah, ngokuqhathaniswa neDerbs (imigwaqo) ezungeze iJaemaa El-Fna, ifaka umoya opholile futhi omubi kakhulu. Lisekhaya laseRoyal Palace, i-El-Badi Palace yangaphambili namaSadan Tombs. Lokhu ngokwemvelo kwakha ukuphepha okungcono, imigwaqo ehlanzayo kanye necebo lokuba yindawo ekhethekile eMedina. IKasbah inezindawo zayo (ama-souikas) amancane, izitolo zokudla, izindawo zokudlela, amahhotela kanye nemincintiswano yabahambi abangayijabulela.
I-Riad yindlu yaseMorocan enegceke elingaphakathi. Iningi lamafasitela libheke ngaphakathi libheke e-atrium ephakathi. Lo mklamo wempahla ufanele isiko lamaSulumane njengoba kungekho sitatimende esicebile somcebo esenziwa ngaphandle, awekho amafasitela ongabheka kuwo. Ukufaka iRiad kufana nokuthola uMgede we-Aladdin ngokuqhathanisa nengaphandle lawo elingachazi. Bayizindawo ezinhle zokuhlala futhi banikezela ukubuyela emuva okusondelene nokuphumula.
Ngenxa yomlando wayo ocebile, kunemifula eminingi emangalisa eMedina yaseMarrakesh. Abaningi babo sekuyiminyaka bebola. Kwi-1980th kanye ne-1990th, ezinye zazo zazithengwa futhi zavuselelwa, iningi lazo ngabantu bokufika. Inkosi yamanje, uMohammed VI, owangena esihlalweni sobukhosi kwi-23 Julayi 1999 wavulela izwe abatshalizimali bakwamanye amazwe. Lokhu kuvuse inkanuko yokuthenga futhi manje imibhikisho eminingi isezandleni zakwamanye amazwe futhi, ngeshwa, iningi labo libuyiselwe kahle. Iningi lezimbangi zemibono zivuselelwa ngezindlela zendabuko zokwakhiwa kweMorocan. Umhlobiso walezi zimbangi (amalambu, ifenisha, izibuko, amakamelo okulala imibhede, amakhethini, njll.) Kuvame ukwenziwa ubuciko beMoroccan, abanye babo basahlala eMedina yaseMarrakesh.
I-Moroccan dirham (MAD) iqokwe ngokusemthethweni njengemali evaliwe, okusho ukuthi ingathengiswa kuphela ngaphakathi eMorocco. Kodwa-ke, ayathengiswa futhi athengwe ezinhlanganweni zezokuvakasha nasezikhumulweni zezindiza ezinkulu emazweni amaningana (ikakhulukazi e-UK). Ukungenisa nokuthekelisa imali kubekezelelwa kuze kufike kumkhawulo we-MAD1000. Uhlobo lwemali oluthengwe ngesikhathi kuvakashelwa eMorocco kufanele lushintshwe lubuyele ngaphambi kokuhamba ezweni, ngaphandle kweleveli leMAD1000. Uyelulekwa ukuthi ugcine amarisidi okushintshaniswa ngemali, ngoba lokhu kuzodingeka ekuguqukeni kubuyiselwe emalini yakwamanye amazwe ngaphambi kokusuka, lapho ungaguqula ama-dirhams amaningi njengoba ushiyile.
Amakhadi amaningi wesikweletu ayemukelwa (ikakhulukazi iVisa, i-MasterCard), yize ama-surcharges ezosebenza njengoba izindleko zokucutshungulwa kwamakhadi wesikweletu eMorocco kubiza kakhulu amabhizinisi. Qaphela ukuthi bambalwa kuphela amabhizinisi aseMorocco anokwazi ukwamukela amakhadi wesikweletu, yize inani likhula kancane.
Yazisa okhipha ibhange noma ikhadi lakho ukuthi uhlose ukuhambela phesheya ukuze kungabekwa block ekusetshenzisweni kwamakhadi wakho wesikweletu noma ama-ATM. Yazisa okhipha bese ubanikeza inombolo yocingo lapho ungaxhumana khona phesheya. Ngaphambi kokuhamba, bhala zonke izinombolo zamakhadi wesikweletu nezinombolo zokuxhumana ezihambisanayo ezikhipha amakhadi uma kunzima. Zicabangele ngokwakho le imeyili. Izinombolo zivame ukukhululeka ukushayela njengoba ungakwazi ukubuyisa izindleko. Kwenze kucace opharetha ehhotela lakho, i-riad, njll., Ukuthi ufisa ukuthi icala lokushayela libuyele emuva. Ngokuncono thola ikhadi elikhokhelwe kuqala, elinamanani amahle okushintshanisa nezimali ezikhishwe kancane isib. FaFF.
Lapho wenza izinkokhelo ngekhadi lesikweletu, isibonelo ehhotela ngezinsiza, kubalulekile ukukhumbula ngekhanda i-PIN njengoba amasiginesha ezimeni eziningi engasamukelwa; izindawo ezithile, njengezindawo zokudlela, zingasebenzisa indlela yakudala yokusayina.
Abantu abaningi manje basebenzisa i-FairFX ekhokhelwa noma ikhadi leCaxton. Lezi zinikeza amanani amahle okushintshana futhi ziphephile futhi imali ivikelwe uma ikhadi elahleka noma libiwe. Amukelwa kuma-ATM aseMorocan nomaphi lapho ubona ilogo ye-MasterCard nakwezinye izitolo, nawo.
Ama-ATM atholakala ngobuningi emadolobheni amaningi futhi amukela i-Visa, Maestro, Cirrus, njll., Kepha lokhu kuvame ukubuyisa izindleko zama-5%. Kufanele ubheke ebhange lakho njengoba izindleko zokusebenzisa ama-ATM phesheya zingenza ukuthi ukushintshana ngokheshi kube yindlela engcono. Izindawo ezidumile ezifana Tangier, IMarrakech, i-Agadir njll inama-ATM emahhotela amakhulu abavakashi nasemigwaqweni emikhulu. IMedina yaseMarrakech inama-ATM angaphezu kwe-20.
Kusetshenziswa ikhadi lesikweletu (i-VISA, njll.) Ukuthola imali kuma-ATM kungenzeka, kepha inzalo ikhokhiswa kusukela lapho imali isabiwa. Ukuzijwayeza okwejwayelekile kwenkathi engenazintshisekelo esebenza kokuthengiwe, okuvamisile ngaphezulu kwezinsuku ze-50, ezenziwe ekhadini AKUSEBENZI ekuhoxisweni kwemali. Amabhange azovumela amasheke ukuthi alahlwe kodwa kumele axhaswe yikhadi lesiqinisekiso.
IMarrakech iyikhaya lomkhakha omkhulu wokuthunga, futhi izimpahla zesikhumba ezisezingeni eliphakeme zingathengwa lapha ngentengo ephansi. Bheka izinto zesikhumba sekamela ikakhulukazi amajakethi, amaphakethe ayindilinga, nezikhwama zezandla.
Ezicathulweni, njalo uhlole ukuthi azinalo iphepha ngaphakathi kwepuleti ('sole' ngesiFulentshi) ngoba kuvamile kakhulu. Ungakhohliswa ukukhombisa ukuthi basigoqa kanjani isicathulo bese besibuyisela esimeni. Zame ngokwakho ngokuzwa nokuzwa ukuthi iphepha ligobeka kanjani. Kwabampofu abasezingeni eliphansi, akufanele ukhokhe ngaphezulu kwe-Dh 40 futhi kwabahle hhayi ngaphezulu kwe-Dh 90. Thenga nxazonke futhi ufunde umehluko phakathi kwekhwalithi.
Okunye okuthakazelayo yizinto ezenziwe ngosilika bendawo, okuyi-rayon ngempela, ifayibha yemvelo eyenziwe ngesitshalo cellulose futhi yakhiqizwa eMorocco. URayon uphatha udayi wamakhemikhali kahle obangela uhla oluchazayo lwemibala yeqiniso (amadayi wemvelo awanakukhiqiza umbala “weqiniso”). Kutholwe kukhona amashidi, izikhwama zezandla, izindwangu zamatafula, amakamelo okulala nemibhede ngemibala emangalisa kakhulu. Abanye abathengisi bazama ukushaja inani eliphakeme le-“cactus silk”. Hlola kahle ngoba kunezimbumbulu eziningi futhi abathengisi bavame ukutshela noma imaphi amanga ukuze uthole ukuthi ukhokhe inani eliphakeme.
Zungeza izinkuni zabumbumbi, ubheke amapuleti anemibala egqamile nezitsha, kanye namamaki kuwo wonke osayizi.
Ama-shawls athandekayo we-cashmere angabanjwa okungaphansi kwesicishamlilo ngokuxoxa okuncane.
Uma ungeke ukwazi ukuvumelanisa imali, kunezitolo ezimbili ezisebenziswa nguhulumeni lapho ungathenga khona imisebenzi yezandla ngamanani amisiwe. Funa ama-douartque d'artisans. Elinye liseduzane naseJaemaa El-Fna kanti elinye liseVille Nouvelle.
Inketho yokuhlola amasousa ngendlela enokuthula okwengeziwe ukuhamba ngomkhuleko wangoLwesihlanu. Yize ezinye izitolo zizovalwa, iningi lihlala livulekile futhi ligcwala kakhulu kunangezinye izikhathi.
Ubusuku ngabunye ku-Djemaa El-Fna imigqa yemigwaqo yezitaladi isetwa ngaphansi kwamatende amhlophe amakhulu. Lezi zindawo zisebenza ngokufana futhi zinamamenyu aphrintiwe ngesiFulentshi, isi-Arabhu futhi ngokuvamile nesiNgisi. Wonke umuntu une-tajine, umzala, i-brochette kanye nesobho. Abanye banezinto ezikhethekile njenge-offal, sandwich noma ama-tajines akhethekile. Yazi ukuthi izindawo zokudlela eziningi zisebenzisa kakhulu “abakhonzayo,” abanolaka ekutholeni amakhasimende izitolo zabo. Ulayini 'esivele sidlile' ubonakala usebenza kahle ukubenza bayeke. Qaphela ukuthi ezinye zokudlela zetende ziningi kakhulu; ungagcina kalula ngokukhokhwa okuphindwe kahlanu kunalokho okufanele ukhokhe.
"'Cafe DuLivre" ". URue Tariq Ben Ziad, nje eRue Zoraya eduze kwase-Av. U-Mohammed V. I-oasis yesikhulumi sesiNgisi. Le cafe ye-hip ine-wifi yamahhala, ibha egcwele, nokunambitheka okuklanywe itiye nekhofi. Inomtapo wezincwadi wesiNgisi ozithengiswayo nokufundwa ezindlini. Imenyu inikela ngaphezu kwenkukhu ejwayelekile ye-tajine ne-rotessorie. Akuyona into engajwayelekile ukuzwa isinhlansi kanye neBob marley esiteringini noma ukuzwa i-hipster entsha yaseFrance noma ye-morrocan eshaya isigingci sabo se-acoustifc. Izindawo eziningi zokubhema ezibhemayo zikagwayi. Banobusuku obumnandi bomculo kanye namaphosta amaningi amemezela ama-workshops we-yoga namakilasi okupheka. Ngokuyisisekelo i-quintessential backpackers cafe.
I-Djemaa El-Fna ngokushibilika okugcwele
Uma ufuna ukudla kahle eMarrakech, yenza okwenziwa ngabantu bendawo futhi kudle ezitolo zokudla esigcawini. Kungumqondo ojwayelekile ukuthi lezi zitolo zilapha izivakashi. Empeleni, bukhona ngaphambi kokuba uMarrakech abe indawo yokuvakasha. Zonke izitishi zingabhekwa njengokuphephe ngokuphelele ukudla kuzo. Banamalayisense aqine futhi balawulwa nguhulumeni, ikakhulukazi manje njengoba kuyindawo ethandwa izivakashi.
Qikelela kakhulu lapho uthatha isinqumo sokudla lapha noma cha. “Amaphutha” wezibalo avame ukwenziwa ngabasebenzi lapho benza imali. Okubizwa nge- “freebies”, njengama-olive namaqebelengwane (okumele abe mahhala), anenkokhelo. Izingxenye ezincane zivame ukuhanjiswa izivakashi. Uhlu olude lokuthi abasebenzi bazokwenzanjani ukuzama ukukudabhula. Izisebenzi zingahle zibonakale zinobungane kakhulu futhi zinobuqili, kodwa konke lokhu kuyabonakala. Bafuna imali yakho futhi bazokwenza abangakwenza, ngisho nokukhohlisa nokuqamba amanga kuwe, ukuze uyithole. Uxwayisiwe. Izitebele eziningi zinama-touts anolaka futhi acindezelayo azama ukwenza ukuba udle kuwo. Bazovimba indinyana yakho engenza kube yinto engathandeki kakhulu.
Amanani avame ukwehluka kancane. Kuya ngokuthi ulambile kangakanani, ungakhokha noma yini kusuka ku-Dh 10 yesinkwa esigcwele amasosi asanda kufakwa noma isitsha sesobho se-harira esiya ku-Dh 100 wokudla okugcwele okugcwele kwesaladi, isinkwa, i-Starter, inkambo enkulu, netiye . Kukhona imikhonyovu yangempela, noma kunjalo, njengokukhokhiswa i-Dh 470 ngokudla okuthile komgwaqo okuphakathi kwabathathu.
Zama i-harira (isobho elikhulu, lewundlu / inyama yenkomo, udali obomvu nemifino) kanye nama-aubergines athosiwe. Ungesabi - zama ikhanda lewundlu: limnandi ngempela. “I-inkunzi,” (inyama yenkomo) nayo kufanele inikezwe ithuba ezitolo ezifanayo.
Ungaphuthelwa itiye! Kukhona umugqa wabathengisi betiyi ngaphambili kwezitolo zokudla abathengisa itiye ngalinye nge-Dh 5 lilinye (kusukela ngo-Ephreli 2013). Iningi letiye kulezi zitalayi yi-ginseng itiye ngesinamoni kanye ne-ginger ... okumnandi kakhulu nokwamukelayo. Futhi banekhekhe, elenzelwe izinongo ezifanayo, ezingaba namandla amakhulu.
Zonke izitolo zokudla e-Djemaa El Fna zibonisa amanani kumamenyu, okwenza kube mancane kakhulu ukuthi uzodingeka, kepha abaningi bazokulethela iziqalo ngaphandle kokubuza, bese ubakhokhisa ekugcineni.
Izitolo zikawolintshi zithengisa ijusi lewolintshi elimnandi, yize kunezikhathi lapho kungenzeka ukuthi kufakwe i-lemonade.
Iziphuzo azivamile kumenyu ngakho-ke kungcono ukubuza inani lazo ngaphambi koku-oda, ngoba kaningi zingaba eziphakeme ngokuqhathaniswa. Ngakolunye uhlangothi, ezinye izitolo zinikeza itiye lamahhala le-mint ukukhuthaza ukuthi ubakhethe.
Ekuseni ekuseni, funa abantu abancenga i-riifa engxenyeni embozwe maqondana neKoutoubia. I-Riifa inhlama eyeluliwe futhi iyagcotshwa bese igoqwa ngaphezulu, bese iphekwa epanini yokuthosa, futhi ichazwa kangcono njengenguqulo ye-pancake noma i-crepe yaseMoroccan.
Abathengisi basemgwaqweni banikela ngejusi lewolintshi elisha (i-jus d'orange) ngengilazi ye-Dh 4. Yizame ngesigaxa sikasawoti esifana nezindawo, kepha qaphela abathengisi abazama ukunisela ijusi phansi ngamanzi empompini. Futhi, naka lapho uthenga njengoba behlinzeka ngezinhlobo ze-2 zewolintshi ... ujusi we-orange wegazi ubiza i-Dh 10 ngengilazi ngayinye kanye nokungaqondi ngalokho ofuna ukukuphuza kungenzeka.
Qinisekisa intengo kasawoti wakho wewolintshi bese uyikhokhela ngaphambi kokuphuza.
Azihlanzekile njalo izingilazi kahle. Kungenzeka ukuthola isisu esikhathazekile kusuka ujusi. Kodwa-ke, abathengisi abaningi bazokunikeza ujusi enkomishini yepulasitiki esikhundleni sengilazi ye-1 Dh eyengeziwe.
Kukhona iziphanzi eziningi esigcawini, futhi zizobheka ukubona uma uthenga ijusi, bese ziqhaqhazela zifuna ushintsho, noma ingilazi yejusi yazo.
Ngaphakathi kweMedina: Kunokukhethwa okulinganiselwe kakhulu kwezindawo ezithengisa utshwala ku-medina.
IGuéliz, ingxenye entsha yedolobha, inezindawo eziningana lapho umuntu engahlala khona aphuze iziphuzo. Ngokuhambisana namasiko endawo, utshwala abuvunyelwa ukuthi ubonwe ngumphakathi futhi nezindawo ezisebenza ngotshwala azizikhangisi obala. Uma ufuna indawo enikeza utshwala, funa izimpawu zokutshelwa: uma igama elithi "ibha" lishiwo eceleni kwegama lendawo (esikhundleni se-cafe / i-bistro kuphela), cishe lizothola iziphuzo ezinotshwala emenyu. Ikhethini elivikela ukungena ngaphandle kungenye uphawu. Khumbula ukuthi lezi zindawo zivame ukuvula kuphela kusihlwa.
ICarrefour, Isuphamakethe esendlini engaphansi kweCarre mall entshonalanga neMagorelle Gardens ithengisa utshwala busegumbini elithile. Imikhiqizo yasendaweni ishibhile kakhulu kunokuthengiswa ngaphandle ngamawayini kungabizi kakhulu ukuyithenga kunobhiya.
IMarrakech yidolobha elivikelekile ngokujwayelekile, elinamaphoyisa aqinile. Kodwa-ke, ukuhlala uqaphile mayelana nendawo okuzungezile futhi uthathe izinyathelo zokuphepha ezijwayelekile kuhlala kuwumqondo omuhle njengakuyo yonke indawo. Nawa amanye amathiphu:
Ubugebengu obunodlame imvamisa akuyona inkinga enkulu, kepha ukweba kuyaziwa ukuthi kwenzeka. Gcina imali yakho isondele futhi ifihliwe, futhi ugweme imigwaqo ekhanyayo noma ama-alleys ebusuku.
Amanzi ompompi eMarrakech alungile ngokugeza. Ngenkathi abantu bendawo beyiphuza ngaphandle kwezinkinga, izivakashi zivame ukukuthola kunzima ukuzigaya. Ukuze uphephe, khetha amanzi amaminerali asemabhodleleni, atholakala ezitolo zemakethe nasezitolo zokudla. Qinisekisa ukuthi i-cap seal ayiphuliwe, ngoba abathengisi baseMorocan baziwa ukuthi bonga imali ngokugcwalisa amabhodlela epulasitiki empompini. Ezitolo zokudlela, cela iziphuzo zakho ngaphandle kwama-ice cubes, avame ukwenziwa ngamanzi kampompi.
Udaba olubalulekile oluphathelene nezindlu zangasese eziseMarrakesh, kanye nasemadolobheni asondelene nalo, ukuthi, izikhungo zezentengiselwano, amakhefu nezindawo zokudlela nazo, azinalo iphepha lasendlini yangasese, ngisho nasegumbini labesifazane. Ngakho-ke umkhuba omuhle njalo ukuphatha iphepha lasendlini yangakini.
IMarrakech ingenza isisekelo esihle sokuhlola i-High Atlas ingabhuka imisebenzi kanye nohambo. Uhambo oluningi lungenziwa kalula nangokungabizi ngemali yokuhamba komphakathi. Futhi izimoto eziqashisayo azibizi kakhulu, futhi ukushayela ngaphakathi Morocco kulula (ngokunakekelwa okuthile kuyadingeka ngenxa yobuncane bemigwaqo.
Vakashela ogwadule: Enye yezinto ezinhle kakhulu ongaphuthelwa kuzo uma useMarrakech. Ungaya ezilungwini ze-Erg Chebbi noma i-Erg Chegaga bese uhlala ubusuku obubodwa noma ngaphezulu lapho. Kokuhlangenwe nakho okungajwayelekile futhi okuyiqiniso. Ukuvakashela u-Erg Chebbi kuhlanganisa uhambo olude lwemoto, futhi kwenziwa kangcono ngebhasi lomphakathi noma imoto eqashiwe, lapho kumiswa khona ubusuku bonke ezindaweni ezinjenge-Ouarzazate, Tinerhir, neBoumalne du Dades (eyodwa endaweni ngayinye), nobusuku okungenani obubili eMerzouga .
I-Agadir - Ogwini lwe-Atlantic lolu luyidolobha eliyitheku eliyinhloko laseMorobha futhi imayelana ne-2 nehora lamahora uhamba ngemoto usuka eMarrakech. Idolobha lacekelwa phansi ngokuzamazama komhlaba i-1960 futhi lakhiwa kabusha ngesitayela sokwenyuka esiphansi sama60s. Inamabhishi amangalisayo futhi ebanda kakhulu kuneMarrakech, ilungele labo abafuna ukuphumula emabhishi, izindawo eziningi zokudlela, imigoqo kanye namakilabhu, izifundo zomhlaba wegalofu futhi inazo zonke izindawo ezifunwa izivakashi zanamuhla.
I-Essaouira - Idolobhana elivikelwe ogwini lwe-Atlantic lolwandle e-Afrika, cishe amahora angama-3 ngemoto / nomqeqeshi ovela eMarrakech. Kunezinkampani eziningi zokuvakasha ezihamba uhambo lwasemini ukusuka eMarrakech futhi, ngaphandle kokuthi uhlela iholide lokuphumula kwelinye lamaholide ka-Essaouira, usuku olulodwa lwanele. Ukuheha okukhulu lapha iMedina encane, okuyisiprofetho esimnandi kakhulu kuneMarakeki Medina - cishe akukho nokuhlukunyezwa okuthengiswa ngabathengisi, abaculi abanohlonze noma abaphathi bepaneli. Kukhona ulwandle oluhle ongaluthokozela futhi ungahlola imbobo yekhulu le-18th.
I-Imouzzer Idolobha elincane lendabuko leBerber liphezulu eMid Atlas. Ubuhle bemvelo buvelele. Ngenkathi i-60km isuka e-Agadir kuphela, imigwaqo ehamba ezintabeni futhi uhambo alulona olunenhliziyo ezibuthakathaka. Ngesikhathi sentwasahlobo izimpophoma zihamba phambili. Idume ngoju, imidwebo kanye namafutha e-argan.
Isiza se-Jbilets Geological
Lamadolobhana ase-High Atlas angabonakala njengengxenye yohambo losuku:
I-Amizmiz - Njengoba inesinye sezikhumbuzo ezinkulu kakhulu zeBerber ezintabeni eziphakeme zase-Atlas njalo ngoLwesibili, i-Amizmiz ilufanele uhambo. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kulabo bahambi abafisa ukuzwa amadolobha amancane, angabahambi kangako ezintabeni eziphakeme ze-Atlas.
I-Asni - Idolobhana yasemakhaya ethandekayo ezintabeni ze-Atlas.
I-Oukaimeden - Ukuphakama kweSki kwa3268m. Iqhwa liwela ezintabeni ngaseningizimu yeMarrakech njalo ebusika. Futhi kuhlala. Abantu abacebile abavela kulo lonke elaseningizimu neMorocco bafunda isikhathi eside ukujabulela ukushushuluza emazweni abo. Lokhu kunikeze i-ski resort, i-Oukaïmeden, ukuthinta okuhlukile kweMoroccan, nakho. Awudingi ukuletha imishini yakho ye-ski ekhaya, konke okudingayo kungaqashwa. I-Oukaïmeden nezindawo ezizungeze ezinye zezindawo ezinkulu kakhulu kuzo Morocco, ezinezinkathi ezine, nemvelo eshintsha njalo. Ehlobo, bambalwa abantu abangena kule ndawo - kungenzeka ukuthi yaziwa kakhulu ngemidlalo yasebusika. Kepha ukuhlala lapha usuku noma ezimbili kuyindlela yokwelapha.
Isigodi Sethu, EziNtabeni zase-Atlas. Uhambo lubandakanya ukumisa amahlandla ambalwa ukuya esigodini ukubheka ezitolo zezivakashi, indlu yaseBerber, nokugijimana kwabesifazane abenza imikhiqizo ngamafutha e-Argan - konke kuyathakazelisa! Ukuvakasha kuzobandakanya ukuhamba ngezinyawo ukuvakashela izimpophoma. Uhambo lungaba nzima, ngakho ukugqoka kahle ukuhamba / kanye / noma ukugibela izicathulo - kubalulekile izicathulo. Cabanga ngokuhlanganisa amadwala eceleni komfula bese ekugcineni ugoba-uwele emadwaleni amanzi ukuhamba intaba.
USetti Fatma. Umuzi osekupheleni komgwaqo ofanele wezimoto ukhuphuka iSigodi Sethu. Ingxenye yokuhlala ingaphezulu komgwaqo futhi ayivakashelwa kakhulu. Okuhehayo indawo enhle yesigodi nokuhamba ngezinyawo kuya kwezimpophoma eziyisikhombisa - noma kubavakashi abaningi bosuku olunye impophoma lapho abanye bebonakala khona.
IJebel Toubkal, ephakeme kakhulu enyakatho ne-Afrika enobude be-4167m indawo lapho izivakashi eziningi zivakashela khona. Isizini enkulu isentwasahlobo kepha ingakhuphuka unyaka wonke. Ukuhamba kuyanconywa ukuba kuhlukaniswe okungenani ezinsukwini ezimbili, ubusuku bungachithwa kwelinye lamandla amabili. Ungathatha uhambo oluvame ukubandakanya iminyuzi ukuthwala imithwalo noma ungakwenza wedwa. Qaphela ukuthi imithetho esanda kushintshwa yashintshwa futhi njengo (Mar 2019) umhlahlandlela odingekile wokuhamba ngeToubkal.
Abanye abaqhubi bezindawo zokuvakasha banikezela uhambo nokuhamba kwabo ngokwezifiso, kufaka phakathi ukubhuka okuthuthukile emahhotela, izindlamlenze, njll. Iningi labashayeli balwazi kahle izilimi zakwamanye amazwe.